खण्ड १३ – विधिहरू – Word of Truth, Nepal
खण्ड १३ – विधिहरू
यूहन्ना ३:१६ — “उहाँमाथि विश्वास गर्ने र बप्‍तिस्मा लिने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्।” यूहन्ना ३:३६ — “जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ र बप्‍तिस्मा लिन्छ ऊसँग अनन्त जीवन हुन्छ; अनि जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दैन र बप्‍तिस्मा लिँदैन त्यसले जीवन देख्‍नेछैन तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ।” यूहन्ना ६:४७ — “जसले ममाथि विश्वास गर्दछ र बप्‍तिस्मा लिन्छ ऊसँग अनन्त जीवन छ।” यूहन्ना ५:२४ — जसले मेरो वचन सुन्छ, र मलाई पठाउनुहुनेमाथि विश्वास गर्छ, र बप्‍तिस्मा लिन्छ, ऊसँग अनन्त जीवन छ।” “तब शैतान आउँछ, र तिनीहरूले विश्वास नगरून् र बप्तिस्मा नलेऊन् र मुक्ति नपाऊन् भनी तिनीहरूका हृदयबाट वचन लैजान्छ।” मर्कूस १६:१६ — “जसले विश्वास गर्छ र बप्‍तिस्मा लिन्छ उसले मुक्ति पाउनेछ; तर जसले विश्वास गर्दैन र बप्‍तिस्मा लिँदैन ऊ दोषी ठहरिनेछ।” प्रेरित १६:३१ — “प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् र बप्‍तिस्मा लिनुहोस् र तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ।” १ कोरिन्थी १:२१ — “प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेहरूलाई मुक्ति दिनु परमेश्वरलाई असल लाग्यो” (पद १३-१७ सित तुलना गर्नुहोस्)।
ठीक कि बेठीक बप्तिस्मा मुक्ति पाउनलाई लिइने कार्य हो
ठीक कि बेठीक बप्तिस्मा मुक्ति पाइसकेको व्यक्तिले गर्ने कार्य हो ठीक कि बेठीकआफ्नो मुक्तिदाताको आज्ञापालन गर्नलाई एउटा मुक्ति पाएको व्यक्तिले गर्न सक्ने सबभन्दा पहिलो कुरामध्ये एउटाचाहिँ बप्तिस्मा हो (प्रेरित १०:४८; मत्ती २८:१९-२०; प्रेरित २:३८)।
प्रेरित ८:३६-३७ अनुसार कसैले बप्तिस्मा लिनुभन्दा अगाडि उसले के गर्नु आवश्यक छ? ________________________________। यसले हामीलाई बच्चालाई “बप्तिस्मा” दिने अभ्यासको बारेमा के सिकाउँछ? _________________________________________
ठीक कि बेठीक पानीको बप्तिस्मा विश्वासी जन ख्रीष्टसँगै उहाँको मृत्यु, दफन र बौरिउठाइमा सम्मिलिकरण गरिएको (एकै बनाइएको) कुराको चित्रण हो (रोमी ६:३-६ र कलस्सी २:१२)।
मानौं कसैसँग आफ्नो पत्‍नीको फोटो छ। एक दिन उसले त्यसलाई आफ्नो कुनै मित्रलाई देखाउँदै भन्दछ, “हेर, यो मेरो पत्‍नी हो।” त्यसको मतलब के हो? अवश्य नै कागतको उक्त सानो टुक्रा नै उसको पत्‍नी हो भन्न खोजिएको होइन। उसले बास्तवमा भन्न खोजेको कुरा यो हो, “यसले मेरो पत्‍नीलाई दर्शाउँछ। यो मेरो पत्‍नीको फोटो हो। जब तिमीले यो फोटोलाई हेर्छौं तब तिमीले मेरो पत्‍नीको विचार गर्नेछौ।”
“यो मेरो शरीर हो” भन्नुहुँदा र “यो मेरो रगत हो” भन्नुहुँदा प्रभुको भनाइको मतलब के थियो? __________________________________________________ __________________________________________________
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-14 14:27:492020-11-04 12:12:37खण्ड १३ – विधिहरू
खण्ड १२ – मण्डलीखण्ड १४ – शैतान